Wararkii Ugu Dambeyay Suuqa Kala Iibsiga Maanta %
By Ramzi Yare	 Last updated May 22, 2019
Waxa si Rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo ay kooxaha qaarada yurub haatanba bilaabi doonaan sidii ay ugu dhaqaaqi lahaayeen xiddigaha ay doonayaan in ay ku xoojiyaan kooxdooda xilli ciyaareedka dambe.
Kooxaha kala duwan ee qaarada yurub ayaa wadahadalo la furi kara xiddigaha iyo waliba kooxaha ay ka doonayaan si ay u dhamaystiraan adeegooda.
Hadaba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyada.
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa saxiixa Goolhayaha Kooxda Valencia ee Neto si uu badal ugu noqdo Goolhaye Petr Cech kaas oo ciyaaraha ka fadhiisan doona dhamaadka xilli ciyaareedkan halka uu Emery sidoo kale doonayo xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Genk ee Leandro Trossard (Plaza Deportiva).
Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa Juventus u sheegay in uu doonayo in uu tababare Jose Mourinho tababare u noqdo kooxda isaga oo sheegay in uuna doonayn Maurizio Sarri (Tuttosport).
Kooxda Borussia Dortmund ayaa ku kalsoon in ay kooxaha Liverpool iyo Tottenham ku garaaci doonto xiddiga Kooxda Bayer Leverkusen ee Julian Brandt (Bild).
Kooxda Inter Milan ayaa doonaysa saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee Jerome Boateng (SportBild).
Kooxda Lyon ayaa xaqiijisay in ay wadahadalo ku aadan xiddiga khadka dhexe ee Tanguy Ndombele kula jirto kooxda PSG (Get French Football News).
Malcom ayaa ku biiri doona kooxaha Tottenham, Borussia Dortmund, AC Milan ama Inter Milan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga kadib markii loo sheegay in uu koox cusub raadsado (AS).
Kooxda Napoli ayaa Man United ka diiday dalab lacageed oo dhan 92 milyan oo euro oo ay ku doonaysay saxiixa xiddiga daafaca ka ciyaara ee Kalidou Koulibaly (Gazzetta dello Sport).
Goolhayaha Kooxda Man United ee David De Gea ayaa diiday dalabkii ugu dambeeyay ee ay Man United u soo bandhigtay si ay heshiis cusub ugu saxiixo taas oo ku qasbaysa Man United in ay iibiso xiddiga (Sun).
Kooxda chelsea ayaa dalban doonta lacag dhan 5 milyan oo euro koox walba oo doonaysa tababareheeda Maurizio Sarri (Sun).
Kooxda chelsea ayaa aqbashay ganaaxa laga saaray suuqa xagaagan iyaga oo ku rajo weyn in laga cafiyo suuqa January ee bilowga sanadka cusub ee 2020 (Sun).
Kooxda Man United ayaa ku rajo weyn in ay dhamaystirto saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Swansea City ee Daniel James todobaadkan (Mail).
Kooxda Man United ayaa u dhaqaaqi doonta saxiixa xiddiga daafaca midig uga ciyaara kooxda Crystal Palace ee Aaron Wan-Bissaka marka ay dhamaystiraan saxiixa Daniel James (Mirror).
Tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in uu kabtanka 1-aad ka dhigo Paul Pogba si uu ugu qanciyo in uu sii joogo kooxda Man United (Star).
Sadio Mane ayaan ku biiri doonin kooxda Real Madrid xagaagan sabab la xidhiidha in ay Liverpool dalbatay lacag dhan 200 oo Milyan oo euro (Express).
Kooxda Liverpool ayaa ka fiirsanaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga kooxda Werder Bremen ee Max Kruse si ay ugu badalaan Daniel Sturridge (Express).
Kooxda Man United ayaa ka shaqaynaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic laakiin Barcelona ayaa dalbanaysa lacag dhan 55 milyan oo euro (Record).
Kooxda Newcastle ayaa xiiso u qabta saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Juan Mata iyaga oo doonaya in ay Premier League ku sii hayaan xiddiga (Sun).
Matthijs de Ligt ayaa lagula taliyay in uu isaga tago kooxda Ajax ogow sababta